यू-आराम prostatitis - prostatitis उपचार,sciatica उपचार,BPH उपचार लागूपदार्थ,हर्बल निकाल्ने कम्पनी,Medoncare औषधि!
प्रोस्टाटाइटिस को लागी U- इजी
U-Easy मद्दतको लागि तयार गरिएको एक अद्वितीय आहार पूरक हो प्रोस्टेट र मूत्र स्वास्थ्य लाई बढावा दिन्छ। यौन प्रदर्शन सुधार गर्छ, शुक्राणु गणना र गुणवत्ता। सामान्य एन्जाइम र हार्मोन चयापचय प्रोमोट गर्दछ
दैनिक ऊर्जा स्तर वृद्धि गर्नुहोस्, स्वस्थ सेल समारोह समर्थन गर्दछ, र समग्र शरीर संरचना सुधार र तपाईं मद्दत गर्दछ.
डन्डेलियन, siraitia grosvenorii, कद्दू रत्तन, मूलांक बहुभुज अफिसिनलिस, honeysuckle, burdock जरा, प्यूरियारिया लोबाटा, गार्डेनिया, स्टेरकुलिया लीचनोफोरा, मकै कलंक, purslane, वीर्य coicis, चामलको गेडा, पोरिया कोकोस.
प्रोस्टाटाइटिसको कारण हुने लक्षण र पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ;
उचित प्रोस्टेट र मूत्र समारोह राख्न मद्दत गर्दछ;
पुरुष कामेच्छा समर्थन गर्दछ, शुक्राणु गणना र गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्;
समर्थन हृदय र प्रतिरक्षा प्रणाली स्वास्थ्य;
विरोधी थकान र निद्रा सुधार।
छन् 14 समग्र प्रोस्टेट स्वास्थ्यलाई असर गर्ने अद्वितीय कम्पोनेन्टहरू.
कद्दू बेल निकाल्ने(300मिलीग्राम):पम्पकिन वेन एक्स्ट्र्याक्ट प्रोस्टेट स्वास्थ्यमा सामान्य मूत्र प्रवाहलाई प्रमोट गरेर र मूत्राशयको आराम कायम राख्न सहयोग गर्दछ.